DHAGEYSO Wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo maanta loo doortay xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo maanta loo doortay xildhibaan ka tirsan Golaha shacabka.
Wasiirka wasaarada qorsheynta, Maalgashiga iyo hormarinta dhaqaalaah dowladda Fedraalka Soomaaliya ,Jamaal Maxamed Xassan ayaa ku guulaystay doorashada kursi ka banaanaa Golaha Shacabka oo maanta ka dhacday Magaalada Garoowe.
Wasiir Jamaal Maxamed Xassan ayaa helay codad gaaraya 49 cod, oo ka mid ahaa 51-kii cod ee laga dhiibtay doorashadii maanta ka dhacday magaalada garowe wuxuuna si rasmi ah uga mid noqday xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyada Soomaaliya.
Kadib markii la soo gabagabeeyay tirinta codadkii ay dhiibteen ergadii codaynaysay ayay Gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya ku dhawaaqeen Natiijada doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada Garowe.
Magaalada Garowe ee Caasimadda maamulka goboleedka Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socotay qaban qaabada doorashadaasi.
Kursiggaan ayaa waxaa horay u baneeyay Dahir Cali Faarax ka dib markii loo Magacaabay Qunsulka Safaaradda dowlada Soomaaliya ku leedahay Jamhuuriyada Jabuuti.
Xubnaha Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee qaabilsan maaraynta doorashadda kursiggaan ayaa maalmo ka hor gaaray magaalada Garowe ee Xarunta gobolka Nugaal, waxayna halkaasi ku xaliyeen Cabasho ka taagneyd doorashadda kursiggaasi bannaanaa.
← Ammaanka Migori oo si weyn loo adkeeyay
Doorashada madaxtinimo ee Cameroon oo maanta dhaceysa →